Marco Van Basten oo sheegay inay AC Milan kusoo noqon doonto booskeedii + Sawirro – Gool FM
(Milano) 30 Sebt 2016 – Marco Van Basten ayaa rumaysan in AC Milan ay leedahay wax kasta oo ay u baahan tahay si ay dib ugusoo laabato kooxdii ay ahaan jirtey.
Jookarkii hore ee Milan iyo xulka Holland ayaa waayo aad u qurxoonaa lasoo qaatay kooxda Rossoneri wuxuuna shalay kasoo qayb galay barnaamij lagu maamuusayay Milan iyo sanad-guuradii 80-aad ee milkiilaha kooxda kasii tegaya ee Silvio Berlusconi oo loo arko nin kacaamiyay kubadda cagta Talyaaniga.
Van Basten ayaa Milan kula guulaystey 4 horyaal iyo 2 European Cups, muddadii 8-dda sano ahayd ee uu ka ciyaarayay San Siro.
“Milan haatan ma aha wixii ay beri ahaan jirtey, markii aan halkan joogey Talyaanigu isagaa ugu xoogganaa kubadda cagta caalamka, Milan markale ayay kusoo noqon kartaa figta sare,” ayuu Van Basten u sheegay Milan TV.
51-jirkan ayaa la hor dhigay su’aal ku saabsanayd bal inuu sheego guusha uu u arko middii ugu waynayd waayihii 30-ka sano ahayd ee Silvio Berlusconi.
“Guushii ugu wanaagsanayd waayihii Berlusconi waa guushii European Cup ee 1989 ee aan ka qaadnay Barcelona. Waxay ahayd riyadeenna waxayna ahayd cajiib.” ayuu ku jwbay.
Van Basten ayaa haatan ka tegey xulka Holland oo uu kaaliye macallin u ahaa, isagoo haatan jago ka qabtay FIFA.
Xafladdan ayaa waxaa sidoo kale joogey Cappello, Sacchi, Baressi, Albertini, Massaro iyo Galliani.
Zidane oo nasiino u jaray Sergio Ramos kulanka axada ee Eibar